I-SAS 2022 I-Agenda Yokuphikisa Age ibenze babuyekezwe LAPHA! | Ukwakheka nezifundo
El Isevisi Yezempilo yase-Andalusian (SAS) ubize izindawo ezingama-4.425 sezikhala ezikhaleni ngesikhathi samahhala. Kepha abakhohlwa ukukhushulwa kwangaphakathi, ngezindawo ezingama-337 ngaphezulu. Zonke zizosatshalaliswa phakathi kwamakhono angaphezu kuka-33, phakathi kwawo okukhona kuwo i-Ophthalmology, Oncology, Pediatrics noma iPlastic Surgery, phakathi kokunye. Kanye nabasebenzi bezokuphatha, abazoba nemisebenzi engaphezu kwama-200, abapheki nabangu-109 nosonhlalakahle abanengqikithi yama-78.
Ama-ajenda wokuphikisa we-SAS
Ngezansi uzothola wonke ama-ajenda abuyekeziwe okuzethula kuzo zonke izikhundla ze-Andalusian Health Service kanye nokuphikisana kwe-SAS:
Ungayibhalisela kanjani imincintiswano ye-SAS
Izicelo zokukwazi ukubhalisela ukuphikisana kwe-SAS, kanye nokukhokhwa okufanayo, zingenziwa nge-telematics. Ngenye yezindlela ezisheshayo, kepha futhi unenketho ephrintiwe.
Uma ukhetha inketho yokuqala, lapho-ke kufanele wenze isicelo sakho sokubamba iqhaza ngewebhusayithi ye- Ibhodi le-Andalusian nakulandelayo ikheli le-imeyili, ukugcwalisa ifomu le-elektroniki elihambisanayo.
Yize kufanele wazi ukuthi ukwenza isicelo ngale ndlela, sizodinga isiginesha yedijithali.
Lapho isicelo sesenziwe, ikhasi lizosikhomba 'kupulatifomu yokukhokha'. Bonke labo bantu abanezinga elithile lokukhubazeka elilingana noma elingaphezu kuka-33% bakhululiwe kuleyo nkokhelo.
Uma ufuna ukukhetha i- uhlelo oluprintiwe, ngeke kube nzima kakhulu futhi. Lapho singenayo isiginesha yedijithali, kuyindlela esisele nayo.
Futhi kuzofanele siye ekhasini lezinsizakalo zezempilo e-Andalusian. Lapho sesifikile, kuzofanele sibhalise.
Ngemuva kwalokho, kuzofanele sihlanganise yonke idatha yomuntu siqu eceliwe.
Uma sesimboziwe, sizothunyelwa i-imeyili enesiqinisekiso.
Ukusuka lapho sizolandela isicelo sethu, sikhombise ithuba esivela kulo, isifundazwe, njll.
Lapho konke sekumboziwe, kuzokhiqizwa idokhumenti. Ngakho-ke, kufanele ngaso sonke isikhathi silondoloze zonke izinguquko esizenzile futhi ekugcineni, siphrinte. Kuyo futhi sizobona isilinganiso esilingana nama-euro angama-42,67.
Khumbula ukuthi kufanele uqiniseke ukuthi yonke idatha nezinkambu kuyambozwa, ukugwema amaphutha.
Kanye uprinte lo mbhalo, kufanele usayine wonke amakhophi.
Ngefomu lokukhokha, sizoya ebhizinisini ukuyofaka imali. Ezinye zezinhlangano lapho ungenza khona Khokha Yilezi: La Caixa, BBVA, Banco Santander, Unicaja, Cajasol, Bankia, njll.
Ekugcineni, safaka wonke amadokhumende emvilophini, njengekhophi yokukhokha imali, isicelo kanye nemibhalo eyengeziwe uma kudingeka. Sizoyisa le mvulophu siye kwa-Central Services ye-Andalusian Health Service, kanye nasezibhedlela ze-Andalusian Health Service noma ePosini.
Izikhundla ezizokhethwa eziphikisweni ze-SAS
Umsizi WonobhalaIzikhundla zabasizi bezokuphatha eMnyangweni Wezempilo wase-Andalusiya ziphethe ama-aphoyintimenti nokubonisana, kanye nokulungiswa kwemibiko ethile. Iphansi labasizi lizoba cishe ama-euro angama-1300. Yize kungesilo inani elinqunyiwe, ngenxa yezinkokhelo ezengeziwe nokunye okungeziwe.
Umsizi ongumhlengikazi: Lesi sikhundla futhi sinomholo ozoba cishe ngama-euro ayi-1320. Njengomthetho ojwayelekile, abasizi baphethe umsebenzi wokuhlanza kanye nokunakekela indawo yokusebenza, ukunakekela iziguli, ukwenza imibhede noma ukuphelezela abagulayo, kanye nokwabiwa kokudla, phakathi kokunye okuningi.
Izingadi: Imisebenzi eyenziwe ngama-oda nayo miningi. Phakathi kwabo kukhona ukuhambisa izinto zombili neziguli. Bazolekelela abahlengikazi, bafake futhi basuse ama-wedge, baphinde basize ngezinsizakalo ezithile zokuhlanza, uma kudingeka. Umholo wakhe ucishe ube ngama-euro ayi-1200.
Ubuhlengikazi: Ukunakekelwa kungenye yemisebenzi eyisisekelo yabo bonke abahlengikazi. Bazeluleka futhi bahlole iziguli, ngenkathi benza izinqumo ngazo. Kungashiwo ukuthi luhlobo lomsizi kadokotela, othumela imisebenzi eminingi kubasebenzi abahlengikazi. Ukwenza ukulapha nokusiza abagulayo nakho kungeminye imisebenzi ebalulekile. Umholo wakhe wedlula ama-euro angama-2000.
Udokotela womzimba: Baphethe ukwenza ukwelashwa kokuvuselela futhi banikela ngezinye izindlela ezingezona ezekwelapha ukuvimbela izifo eziningi. Umholo wama-physiotherapists ungama-euro angama-1900.
Ukuwashwa noku-ayina: Umholo wabasebenzi bokuwasha noku-ayina ungama-euro angama-1000. Njengoba sishilo ngaphambili, kungahluka ngokuya ngezinkokhelo ezingeziwe nezinye izinzuzo. Njengoba igama labo likhombisa, baphethe ukuhlanza imibhede nokuyibeka ngendlela.
UMatron: Umbelethisi noma umbelethisi uphethe ukweluleka ngezindlela ezahlukahlukene zempilo. Kokubili kwezocansi ngokujwayelekile nangesikhathi sokukhulelwa, ukubeletha noma ukuncelisa ibele. Ngokuqondene nomholo, kufinyelela ngaphezu kwama-euro angama-2000.
Isikhafu: Umholo wabasizi ngama-euro ayi-1200. Uzoba umsizi wompheki omkhulu futhi ngaso sonke isikhathi uzokwazi ngemisebenzi ehlukene yekhishi. Uzohlela i-pantry, agcine konke ukuhleleka, futhi anakekele nokuhlanza.
Uchwepheshe we-Radiodiagnosis: Banesibopho sokuthatha izithombe zomzimba ukuvikela izifo ezithile. Ukwenza lokhu, basebenzisa ubuchwepheshe obucishe bube yinkimbinkimbi njenge-ultrasound noma imisebe kazibuthe nama-X-ray. Umholo wabo wedlula ama-euro ayi-1500 XNUMX.
Uchwepheshe Wekhemisi: Iholo lesisekelo likasokhemisi ingu-1329 euros. Inikezelwe ekulungisweni, kanye nokongiwa noma ukukhishwa kwemithi. Ungazisabalalisa nasezibhedlela futhi ulungiselele imikhiqizo kepha njalo ngaphansi kweso elibukhali losokhemisi.
Njengoba wazi kahle, okukhethekile ngakunye kunefayela le- i-ajenda ethize konke kuqondana kokunye okuzoba okuvamile futhi okulandelayo:
Isihloko 1. Umthethosisekelo waseSpain wango-1978: Amagugu aphezulu nezimiso ezikhuthazayo; Amalungelo nemisebenzi eyisisekelo; Ilungelo lokuvikelwa kwezempilo.
Isihloko 2. ISitatimende Sokuzimela se-Andalusia: Amanani aphezulu nezinhloso eziyisisekelo; Amalungelo omphakathi, imisebenzi kanye nezinqubomgomo zomphakathi; Amakhono ezempilo; Ukuhlelwa kwesikhungo soMphakathi Ozimele; Ukuhlungwa kwemikhuba.
Isihloko 3. Inhlangano yezempilo (I). Umthetho 14/1986, ka-Ephreli 25, General Health: General Principles; Amakhono Wokuphathwa Komphakathi; Inhlangano Jikelele yoHlelo Lwezempilo Lomphakathi. Umthetho Wezempilo 2/1998, kaJuni 15, Andalusia: Inhloso, imigomo nobubanzi; Amalungelo nemisebenzi yezakhamizi maqondana nezinsizakalo zezempilo e-Andalusia; Ukusebenza kahle kwamalungelo nemisebenzi. Uhlelo lwezeMpilo lwe-Andalusi: ukuzibophezela.
Isihloko 4. Inhlangano yezempilo (II). Isakhiwo, ukuhlelwa namandla oMnyango Wezempilo kanye ne-Andalusian Health Service. Ezempilo e-Andalusia: Isakhiwo, ukuhlelwa nokusebenza kwezinsizakalo zokunakekelwa okuyisisekelo e-Andalusia. Inhlangano Yosizo Olukhethekile e-Andalusia. Inhlangano Yokunakekelwa Okuyinhloko. Inhlangano Yesibhedlela. Izindawo Zokulawulwa Kwezempilo. Ukuqhubeka kokunakekelwa phakathi kwamazinga okunakekelwa.
Isihloko 5. Ukuvikelwa Kwemininingwane. Umthetho we-Organic 15/1999, wangoDisemba 13, ekuVikeleni Kwemininingwane Yomuntu: Injongo, ububanzi besicelo nezimiso; Amalungelo abantu. Isikhungo SaseSpain Sokuvikelwa Kwemininingwane.
Isihloko 6. Ukuvimbela izingozi emsebenzini. Umthetho 31/1995, kaNovemba 8, on the Prevention of Occupational Risks: Rights and izibopho; Ukubonisana nokubamba iqhaza kwabasebenzi. Inhlangano yokuvimbela ubungozi emsebenzini e-Andalusian Health Service: Amayunithi Wokuvimbela ezikhungweni Zosizo ze-Andalusian Health Service. Ukuphathwa kwezinto eziphilayo. Ukuhlanzeka kwesandla. Isimo. Izikrini zokubonisa idatha. Ukubhoboza ngengozi. Ukuhlaselwa kochwepheshe. Ukulawulwa kwezimo ezingqubuzanayo.
Isihloko 7. Umthetho 12/2007, kaNovemba 26, ekuGqugquzelweni kokulingana ngokobulili e-Andalusia: Injongo; Indawo yokufaka isicelo; Izimiso ezijwayelekile; Izinqubomgomo zomphakathi zokukhuthaza ukulingana ngokobulili. Umthetho 13/2007, kaNovemba 26, mayelana nokuVikela nokuVikela okuPhelele mayelana nokuhlukunyezwa ngokobulili: Inhloso; Indawo yokufaka isicelo; Izimiso eziqondisayo; Ukuqeqeshelwa ochwepheshe bezempilo.
Isihloko 8. Isimo Sezomthetho Sabasebenzi. Isikhathi Sokungahambelani Kwabasebenzi enkonzweni Yezokuphathwa Komphakathi. Umthetho 55/2003, wangoDisemba 16, Uhlaka Lomthetho Wezisebenzi Ezisemthethweni Zezinsizakalo Zezempilo: Ukwahlukaniswa kwabasebenzi abasemthethweni; Amalungelo nemisebenzi; Ukutholwa nokulahlekelwa yisikhundla sabasebenzi abasebenza ngokomthetho unomphela; Ukuhlinzekwa kwezindawo, ukukhethwa nokwenyuswa kwangaphakathi; Ukuhamba kwabasebenzi; Umsebenzi; Umholo; Izinsuku zokusebenza, izimvume namalayisense; Izimo Zabasebenzi Ezisemthethweni; Umbuso wokuqondiswa kwezigwegwe; Amalungelo wokumelwa, ukubamba iqhaza nokuxoxisana ngokuhlanganyela.
Isihloko 9. Ukuzimela kwesiguli namalungelo nezibopho maqondana nolwazi nemibhalo yomtholampilo. Umthetho 41/2002, wangoNovemba 14, okuyisisekelo olawula Ukuzimela kwesiguli namalungelo nezibopho endabeni yolwazi nakumadokhumende omtholampilo: ilungelo lokuthola ulwazi lwezempilo; Ilungelo lemfihlo; Ukuhlonipha ukuzimela kwesiguli; Umlando wezokwelapha. Imvume enolwazi. Ikhadi lezempilo.
Ukuze ukwazi ukukhetha okukhethekile, sikushiya nalesi sixhumanisi, lapho uzothola khona wonke ama-ajenda okudingayo ngendlela esheshayo nelula.
ubuncane beminyaka bungu-16.
Ubuzwe baseSpain kanye nezakhamizi zamazwe angamalungu e-European Union.
Yiba nefa le- isihloko esidingekayo kuzisekelo ezithile zekholi ngayinye, kuya ngesikhundla esizofika kuso.
Ukungabi nanoma yiluphi uhlobo lwefayela lokuqondiswa kwezigwegwe ngaphakathi kokuhlinzekwa kwanoma iyiphi i-Health Service noma ye-Public Administration.
Ukungabi nesigwebo nesigwebo sokugcina nganoma yiliphi icala elenziwa ngenkululeko noma elifaka ukushaya, kanye nokuhlukumeza ngokocansi.
Uma sikhuluma ngezindawo ezibekelwe abantu abakhubazekile, abafakizicelo kuphela abanezinga elithile lokukhubazeka elilingana noma elingaphezu kuka-33% abangabamba iqhaza.
Ngaphezu kwalezi zidingo ezijwayelekile, iziqu ezidingekayo kokukhethekile ngakunye kumele kubhekwe:
Isihloko Sobuchwepheshe Ophakeme (Ukuqeqeshwa Kwezobuchwepheshe Kwedigri Ephakeme yanoma yiliphi igatsha). IBachelor ephakeme noma i-BUP.
Ukuhlolwa kokungena eNyuvesi kwabantu abaneminyaka engaphezu kwengama-25 ubudala.
Isihloko Sezobuchwepheshe (Ukuqeqeshwa Kwebanga Laphakathi Naphakathi).
Imfundo Yesibili Eyimpoqo.
Ukuqeqeshwa Kokuqala Kwezobuchwepheshe.
Isihloko Sobuchwepheshe Bomsizi Wezokwelapha (Igatsha LokuQala Lokuqeqeshwa Kwezobuchwepheshe, igatsha Lokunakekelwa Kwezempilo).
Uchwepheshe Womsizi Wabahlengikazi (Professional Module Level 2).
Ukuqeqeshwa kwezinga eliphakathi nendawo.
Ilayisense yokushayela yeBanga B ngokugunyazwa kwezokuthutha ezikoleni, ezokuthutha abagibeli zomphakathi.
Isihloko Sobuchwepheshe Ophakeme (Ukuqeqeshwa Kwezobuchwepheshe Kwedigri Ephakeme yanoma yiliphi igatsha).
Okwesibili Degree Professional Training noma okulinganayo.
Iziqu Zokuthweswa Iziqu Kobuhlengikazi.
Yokunakekelwa Kwamakhemikhali Okuyinhloko:
Isiqu seBachelor ePhemesi noma iBachelor's Degree ePhemesi.
Ochwepheshe Bendawo Ongayikhetha:
Isihloko sompetha kokukhethekile okuhloselwe ukufinyelela kukho.
Ukuphikiswa kwe-SAS yePhysiotherapy:
IDiploma kuPhysiotherapy noma iDegree kuPhysiotherapy.
Isazi se-ATS / Ngenxa yePhysiotherapy.
Idigri Yezobunjiniyela Yezobuchwepheshe noma iDegree ku-Engineering.
Isihloko Sochwepheshe Kwezobuhlengikazi Obelethayo (Zababelethisi).
Odokotela Bomndeni Bokunakekelwa Okuyinhloko:
Isihloko sochwepheshe bezokwelapha emkhakheni wezemithi nowomphakathi.
Okwabasebenzi Bokuhlanza Ne-ayina, umsizi wasekhishini:
Isihloko sochwepheshe e-Pharmacy (Professional Training of Medium Degree, igatsha lezempilo).
Ukuphikiswa kwe-SAS yochwepheshe abangochwepheshe ku-Radiodiagnosis:
Isihloko Sochwepheshe Bezobuchwepheshe eRadiodiagnosis (Okwesibili Kwedigital Professional Training, Igatsha Lezempilo).
Isihloko Sompetha Ophakeme Esithombeni Sokuxilonga (Umjikelezo Wokuqeqesha Ophakeme, Impilo Yomndeni Ochwepheshe)
IDiploma Yenyuvesi Yezobuhlengikazi.
Iziqu zobuchwepheshe ku-Radiology kanye ne-Electroradiology.
Ukugunyazwa kokusebenzisa imishini ye-X-ray ngezinhloso zokuxilonga ezikhishwe nguMkhandlu Wezokuphepha Wenuzi
Uchwepheshe Wezobuchwepheshe ku-Radiotherapy:
Isihloko sochwepheshe abangochwepheshe ku-Radiotherapy (Second Degree Professional Training, igatsha lezeMpilo).
Isihloko Sochwepheshe Ophakeme ku-Radiotherapy (Umjikelezo Wokuqeqesha Wezinga Eliphakeme, Impilo Yomndeni Ochwepheshe).
Ilayisense yokuhlinzeka ngemisebe enemisebe ekhishwe yiNuclear Safety Council emkhakheni wesicelo se-radiotherapy.
Ngomsebenzi Wokuphatha Kwezobuchwepheshe:
Iziqu ze-Social Work.
Uhlelo lokuhlola noma lokukhetha
Njengoba kwenzeka kaningi kulezi zimo, ukuhlolwa kunezingxenye ezimbili ezijwayelekile. Esinye sazo isigaba okuthiwa siphikisayo kanti esesibili, leso somncintiswano wokufaneleka.
Amaphuzu aphezulu kulesi sigaba azoba amaphuzu ayi-100. Kuzoqedwa futhi kuzoba nokuhlolwa okulandelayo:
Kwenziwa uhlu lwemibuzo lwethiyori. Kuzoba nemibuzo eyi-103 isiyonke futhi yonke izokhethwa kaningi. Khumbula ukuthi ezintathu zazo zizobekelwa. Amaphuzu aphezulu angaba amaphuzu angama-50.
Ingxenye yesibili uhlu lwemibuzo olusebenzayo olunemibuzo engama-50, futhi nokukhethwa okuningi. Lapha kuzongena ingqikithi ethile yengxenye esiphikisana nayo. Imvamisa zakhiwa ngamacala emitholampilo angempela. Amaphuzu aphezulu kule ngxenye azoba amaphuzu angama-50.
Kubantu abakhetha izindawo zokufinyelela ezibekelwe abantu abakhubazeke ngokwengqondo, banokuhlolwa kokuqeda. Izofaka phakathi ukwenziwa kohlu lwemibuzo olunemibuzo eminingi yokuzikhethela engama-50.
Kufanele wazi ukuthi impendulo ngayinye efanele izolinganiswa ngamaphoyinti ama-2, hhayi ukukhipha amaphuzu ezimpendulo ezingalungile. Ukudlulisa isigaba sokuphikisa, amaphuzu atholiwe (isamba samaphuzu atholakele kuhlu lwemibuzo lwethiyori nakuhlu lwemibuzo olusebenzayo) kufanele afinyelele, okungenani, ama-60% amaphuzu.
Uma usudlulile esigabeni esiphikisayo, lapho-ke uzofinyelela esigabeni esibizwa ngomncintiswano. Lapha amaphuzu aphezulu esingawathola azoba amaphuzu ayi-100. Lezo ezitholwe esigabeni sokuqala nazo zizongezwa.
Manje njengoba sesazi amaphuzu abalulekile okuzokwazi ukukunethulela wona emincintiswaneni ye-Andalusian Health Service (SAS), sekuyisikhathi sakho, ngoba izindawo ziyaqhubeka nokwanda minyaka yonke.